China Escalator gungano rekushandisa saiti peji 5 fekitori nevatsigiri | Hongli
Sungunuka Kupusha Zvigadzirwa Kugadzira Line
Anosimudza musoro anotambanudza
Escalator inoshandisa simbi yekutsigira
Side panhi mbiri musangano musangano
Escalator yekushandisa musambo mutsara
Escalator musangano wekushandisa saiti 5
1,2m inonyungudika-kuputika mucheka wekugadzira machira
1.6m inonyungudika-yakaputika mutsara wekugadzira mutsara
Magetsi kudzora basa
Kune nzira mbiri. Iyo yekutanga mhando yakajairika modhi, uye yechipiri modhi ndeyokugadzirisa mamiriro. Iyo yakajairika mamiriro apo ese asiri-ekugadziridza plugs mune yepamusoro uye yepasi muchina mukamuri akaiswa. Iyo inokwira inotangwa kutenga vashandi neiyi kiyi kana pasina munhu mairi. Tsvimbo inodzvanya bhatani rekumisa kuti imise escalator. Kana chiratidzo chakakosha chagashirwa, inotangwa uye inomhanya yakatarwa nekumhanyisa. Unplug imwe yemapuranga asiri-ekugadzirisa uye isa bhokisi rekugadzirisa mumodhi yekugadzirisa. Mushandisi anogona kushandisa bhokisi rekugadzirisa kuvhura manera. Panogona kuve nebhokisi rimwechete rebasa munzvimbo yepamusoro uye yepasi muchina. Kana mabhokisi maviri ebasa akaiswa panguva imwechete, kukwidziridzira hakugone kutanga.
Pedal aigona kushandisa rese aluminium alloy die kufa kana stainless simbi Cascade. Nekuti iine uremu huremu, hwakanyanya kuwanda uye wakanaka chitarisiko. Uye iyo yakakwenenzverwa roller inoitwa nesimba rakakura kunze kwenyika polyurethane.
Iyo nhanho drive keteni inotora yekupuruta pendi kudzivirira ngura. Icho chikamu chinosenderwa chinotsigirwa neapakati girairi njanji inotsigira. Iyo yepakati girazi redhivhi yekutsigira ndiro yakagadzirwa ne CNC zvishandiso. Iyo yepakati gwara njanji inogadzirwa neyeprofile, yakatsiga-anti-ngura.
Dhiraivha uye kumanikidza mudziyo zvese sprocket. Drive sprocket inoda mazino egiya kuti ayananiswe. Iyo drive tensioning shaft inofanira kunge yakaenzana. Uye bhodhi yeapron inoitawo basa rekudzivirira kutsauka. Izvo zvinoitawo senge pombi njanji, kudzivirira nhanho kubva kudonha uye kutsvedza pasi.
Escalator musangano wekushandisa saiti peji 4
Akaderedza musoro wokuparadzira
Escalator musangano wekushandisa saiti 2
Escalator musangano wekushandisa saiti 1
Kwete 10 Hanma Road, Linpu Town, Xiaoshan dunhu, Hangzhou
Yakanakisa Musangano weVashandi Musangano ...
Makorokoto pawebhusaiti itsva yeHan ...